लुम्बिनीमा क्याम्पस प्रमुखको स्वागत – Dainik Lumbini
बुटवल । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त भएका नीर बहादुर गुरुङलाई एक कार्यक्रमकाबीच स्वागत गरिएको छ । निमित्त क्याम्पस प्रमुख रहेका गुरुङलाई विश्वविद्यालयले चार वर्षका लागि क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो ।
केन्द्रीय क्याम्पस लुम्बिनीमा बिहिबार भएको स्वागत कार्यक्रममा वक्ताहरुले गुरुङलाई बधाईसहित केन्द्रीय क्याम्पसलाई नमुना बनाउन शुभकामना दिए । केन्द्रीय क्याम्पसले लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु अन्य क्याम्पसका लागि सिकाई हुने भन्दै वक्ताहरुले विश्वविद्यालयको उत्कृष्ट ऐनाको रुपमा क्याम्पसलाई अघि बढाउन सुझाव दिए ।
सो अवसरमा बोल्दै विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.हृदय रत्नबज्राचार्यले बौद्ध सुन्दरता सहितक्याम्पसको विकास गर्नु पर्ने बताए । विश्वविद्यालयको उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर प्राज्ञिक उन्नयनको काम गर्न उनले आग्रह गरे ।
त्यस्तै विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलकराम आचार्यले नवनियुक्तक्यामपस प्रमुखको नेतृत्वमा क्याम्पसलाई एक शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्नु पर्ने बताए । उनले क्याम्पस प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरुको प्रमुख रोजाईमा पर्ने गर्ने विकास गर्नु पर्ने दिशानिर्देश गरे ।
सो अवसरमा बोल्दै गुरुङ्गले आफू चिवर विनाको भिक्षु बनेर क्याम्पससहित सि‌गो विश्वविद्यालयको शैक्षिक विकासमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । विश्वविद्यालयले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएकोमा खुसी साट्दै उनले सहकार्य र सहयोगी बनेर काम गर्ने बताए ।
सहायक क्याम्पस प्रमुख डा. शरदा पौडेलको अध्यक्षता, निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख फणीन्द्र कुमार न्यौपानेको स्वागत तथा प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्र गुप्ताको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । सो अवसरमा नवनियुक्त गुरुङलाई विश्वविद्यालयका डीन, निर्देशक, प्राध्यापक, शिक्षक कर्मचारीहरुले बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए ।
निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख फणीन्द्र कुमार न्यौपानेको कार्यकाल सम्पन्न पश्चात रिक्त रहेको क्याम्पस प्रमुखको पद कार्याकारी परिषद्को भादौ २५ गतेको निर्णयले गुरुङलाई नियुक्त गरेको थियो ।
कोरोना राेक्न मास्क कति उपयोगी ?
रित्तियो विपन्नको भान्सा
पाल्पामा एकै दिन ८२ संक्रमित थपिए